Masar: Magacaabista Xilka RW oo wali la Sugayo
Warar horudhaca ayaa sheegay in Madaxweynaha KMG ah ee wadanka Masar Adly Mansour, uu ra’iisul-wasaare KMG ah u magacabaay siyaasiga Maxamed ElBaradei, wararkaas oo madaxtooyadu ay mar dambe beenisay.
Afhayeenk u hadlay madaxtooyada Masar ayaa sheegay in Mr. ElBaradei uu ka mid yahay dadka isha lagu hayo, hase yeeshee ayna wali cidna magacaabin.
Dhinaca kale, waxaa wali socda dibadbaxyadii iska soo horjeeday, iyada oo milateriga Masar uu xabsiga dhigay Madaxweyne Morsi yo hogaamiyayaal kale oo ka tirsan Ururka Ikhwaanul Muslimiin, waxa ayna sheegeen in talaabada ay qaadeen ay uga hortagayeen in kacdoon ballaaran uu dalka ka dhaco oo ay kala danbeyntiina meesha ka baxdo.
Taageerayaasha Morsi ayaa weli banaanbaxyo balaaran ka wada magaalada Qaahira iyo qeybo kale oo ka mid ah dalka Masar, waxa ayna sheegeen inay sii wadayaan mudaharaadkooda ilaa iyo inta laga soo celinayo Madaxweyne Morsi.
Wararka ka soo kordha qofka RW loo magacaabo, kala soco VOA.